Apple's AirPower ayaa garaaci kara dukaamada dhamaadka bisha | Wararka IPhone
Apple's AirPower Wireless Charging Pad si uu u Daahfuro Bishan Danbe
Durante bilowga iPhone X AirPower ayaa sidoo kale la soo bandhigay, qalab aasaasi ah oo lacag la'aan ah oo loogu talagalay Apple, oo oggolaan doonta xukun wireless Qalabka Apple. Waqtigan xaadirka ah waad buuxin kartaa Apple Watch, sanduuqa AirPods ee gaarka ah iyo iPhone X. Taariikhda la bilaabay saldhigga lacag-bixinta lama yaqaan, laakiin macluumaadka ugu dambeeyay waxay soo jeedinayaan inay bilaabi doonto ganacsi ahaan dhamaadka bishan.
Waa inaan xasuusnaano inay jiraan shakiyo badan oo ku saabsan saldhiga lacag bixinta maadaama aan kaliya ognahay si hubaal ah inay awood u yeelan doonto inay ku dalacdo aaladaha Apple. Laakiin la jaanqaadi kara Qi heerka, waxay ku soo oogi kartaa qalab kale oo wireless ah oo ku shaqeeya lacag la'aan.
Ugu dambayntii ma arki doonnaa Apple's AirPower bishan?
Macluumaadka wuxuu si toos ah uga yimaadaa websaydhka Taiwanese DigiTimes, taas oo hubisay taas Apple waxay maanka ku haysaa inay bilowdo saldhiggeeda AirPower ku amraya si dhakhso leh ka hor dhammaadka Maarso. Macluumaadkani wuxuu ku soo beegmayaa kii la daabacay toddobaadyo ka hor kaas oo Best Buy macluumaadkiisa gudaha la sii daayay iyo warbixinno lagu lafa guray oo ku saabsan soo saarista AirPower inta lagu jiro bisha Maarso ay ahayd mid si xamaasad leh u dhacday.
Waxaan haynaa macluumaad aad u yar Ku saabsan saldhigga lacag bixinta tan iyo markii ay yihiin Cupertino ma aysan xaqiijin wax macluumaad ah oo qalab ah ama farsamooyin farsamo ah, ama macluumaad la xiriira sanduuqa la jaan qaadaya saldhigga lacag la'aanta ah ee AirPods. Waxa kaliya ee aan ognahay waa taas Waxay ka qaadi doontaa lacag dhan ilaa saddex aaladood isla waqti isku mid ah. Waqtigan xaadirka ah waxaan xaqiijineynaa in aaladaha Apple, laakiin ay ku saleysan yihiin heerka Qi ee lacag la'aanta wireless, waxay ku dallaci kartaa aaladaha saddexaad, in kasta oo aan la xaqiijin karin.
Apple ayaa lagu wadaa inay soo bandhigto AirPower dekedda lacag la'aanta ah ee loogu talagalay dhammaadka Maarso. Ganacsatada Taiwan ee […] waxay u baahdeen inay aasaasaan saldhigga inay filayaan in shixnadoodu labanlaabmayso rubuca koowaad ee 2018 oo ay sii korodho rubuca labaad.
Waxaa wajahday ogeysiiska Apple ee soo socda, cutubyadii ugu horreeyay ee la iibiyay waxay xaqiijin doontaa wixii naloo sheegay tan iyo markii ay si wada jir ah u soo bandhigeen iPhone X. Intaa waxaa dheer, waan arki karnaa waxa soo galinta iyo soo saarida awooda loo isticmaali jiray in lagu soo dallaco mid kasta oo ka mid ah aaladaha iyo qaabka ugu dambeeya ee hawlgalka, maadaama ay jiraan shaki ku saabsan habka ay Apple u maareyn doonto danab kuleylka ku kacaya qalabka ay AirPower ka qaado.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple's AirPower Wireless Charging Pad si uu u Daahfuro Bishan Danbe
Waa war wanaagsan kuwa sugaya salka in ay awoodaan in ay ku soo dallacaan aaladaha oo dhan isla markaa isla markaana aysan haysan 30 fiilooyin ama isku xirayaal.
Jawaab Sergio Rivas
Fitbit Versa, waa fitnada cusub ee Fitbit ku leedahay wearables
9x25 Podcast: Apple wuxuu ku dhawaaqay WWDC 2018